Tifaftiraha Tv-ga ee Vogue Anna Wintour waa qof halyeey ah. Waxaa laga yaabaa inaanay jiri doonin ugu yaraan hal caan ah oo kale, yaa qori lahaa buug inta lagu guda jiray noloshiisa oo ay ku toogteen filin ku saabsan magaca caalamka. Sidaa daraadeed, goobo balaadhan oo dadwaynaha ah ayaa si fiican u ogyahay dabiicada casriga tafaftiraha tifaftiraha, ma aha in la sheego asalkiisa gaarka ah, qaabka shakhsi ahaaneed, kaas oo aan isbeddelin muddo ka badan toban sano.
Timuhu waa isku mid 14 sano. Sanduuqa "Nominal" ee Blahnik AW, oo ay abuureen Manolo Blahnik gaar ahaan iyada. Jacket, waa hubaal, ka soo Chanel, dhar daabacan ama maro, muraayadaha indhaha. Iyo sidoo kale waxyaabo badan oo madow ah ee dharka iyo qurxinta. Anna Wintour waligeed iskuma dayin in ay raacdo isbeddellada casriga ah, xitaa haddii ay weydiistaan ​​couturier dhabta ah - Wintour nafteeda waa isbeddel.
Dhegaystayaasha xiisaha leh ayaa sidoo kale loo isticmaalaa si ay u arkaan Vogue Editor habka caadiga ah, taas oo ah cajiib ah oo la yaab leh markii ay bilaabatay inay ka muuqato waxyaabo aan caadi ahayn iyada at New York Fashion Week muujinaya. Tusaale ahaan, bandhigga Calvin Klein Anna Vinur ayaa ku timid dharka asalka ah ee kabaha buluuga ah. Natiijo ahaan, ku saabsan dharkeeda ka dib markii nijaasta ka xishoodey wax ka badan oo ku saabsan sumadda dayrtii la arkay ee astaanta. Anna Anna Wintour miyuu kufaraxsanaa fasaladooda weligeed ah?
Naqshadayaasha Marc xiran by Marc Jacobs abuuray astaanta gaarka ah
Waxa loo dabaaldegayo sanadka cusub ee qaboojinta dabka
Hadda Cinderella waxay leedahay kabo wanaagsan oo ah kabo kiilofoolin ah oo ka yimaada naqshadeeyayaasha
Nicolas Zheskier's Collection Cruise Collection ee Louis Vuitton
Todobaadka Fashion Week ee London waxay u guureen meel cusub
Ku safrida eyga: talooyin iyo khiyaamo
Baastada leh khudaarta
Digaaga la qalajiyey
Saabuunta timaha ee guriga: faa'iidooyinka iyo cuntada sida maskaxda guriga
Sida loo diyaariyo bambo loogu talagalay qubaysiga guriga
Sida loo kordhiyo caafimaadka haweenka
Gudaha iyo calaamadaha barafka
Dana Borisova ayaa marka hore u sheegtey hadiyad deeqsi ah oo ka timid shil shil ah
Nadaafad ku habboon xoojinta xoojinta
Sida loo noqdo qurux iyo farxad
Daweynta Dabeecadda: dhagxaanta bogsashada
Qalabka aan qaliinka iyo qalliinka ee daaweynta qanjirka 'varicose'
Caadooyinka ugu waxyeelada badan
Saddex bilood oo uur leh, sawir
Qaababka daweynta iyo qadiimka ah ee ciriiriga
Halloween 2016: halkaa lagu dabaaldego - dhacdooyinka iyo xisbiyada ku yaal Moscow iyo Ruushka
Xagaaga quruxda badan: dooro kabaha ugu raaxada badan iyo kuwa isboortiga leh ee leh Econika
Waa maxay isticmaalka avokado?